Izindiza zokuqala zabagibeli zasekhaya "C919" ezivela kuHoneycomb neminye imikhiqizo ehlanganisiwe maduze izokwethulwa ngensizakalo yezindiza-Imboni Yezindaba-Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd
Amabutho Kazwelonke Wezokuvikela
Izindiza zezindiza nezasemkhathini
Ifenisha namakhabethe ekhishi
Ulapha : Ikhaya>Izindaba>Industry News
Izindiza zokuqala zabagibeli zasekhaya ze- "C919" ezivela ku-Honeycomb neminye imikhiqizo ehlanganisiwe maduze izokwethulwa ngomsebenzi wezindiza
Isikhathi: 2021-02-22 Ukushaya: 23
Ngokusho kwezindaba ezivela embukisweni wezinto zokwenziwa waseChina International, indiza yokuqala enkulu yasekhaya evela kuzinyosi neminye imikhiqizo eyinhlanganisela izothola isitifiketi sokulungela ukuba semoyeni eShanghai.
Ukuthuthukiswa kwezindiza ze-C919 kwaqala ngo-2008, umhlangano wokugcina waqedwa ngoNovemba 2, 2015, kanti indiza yokuqala yethulwa ngempumelelo ngoMeyi 5, 2017. Njengamanje, kunezindiza eziyisithupha ze-C919 ekuhlolweni kwendiza ye-forensic.
Ngokusho kwemibuthano yezindiza i-C919 ilingana nezinhlobo zezindiza ezisabalele kakhulu emhlabeni, iBoeing 737 ne-Airbus A320. Iphrojekthi iqoqe ama-oda ayi-815 avela kumakhasimende angama-28, phakathi kwawo okuyiChina Eastern Airlines - umsebenzisi wokuqala emhlabeni.
NgoNovemba 27, 2020, umhlangano wokubuyekezwa kwezindiza zeC919 mayelana nemibhalo yawo yokuhlola nokugunyaza wabanjelwa eNanchang, esifundazweni saseJiangxi. I-CAAC Shanghai Aircraft Airworthiness Certification Center ikhiphe imvume yokuqala yokuhlola (TIA) yephrojekthi ye-C919.
Kusho ukuthi ukumiswa kwezindiza ze-C919 kuhlelekile, ukwakheka kwezindiza kuyaqinisekiswa, isimo sohlelo ngalunye lwezindiza sifeza izidingo futhi siqinisekiswe ukuthi siqinisekisa ukuphepha nokusebenza ngesikhathi sokuhlolwa kokuvunywa kwezindiza; ngasikhathi sinye, kuphawula nokuthi izindiza ze-C919 zingene ngokusemthethweni esigabeni sokuhlolwa kwezindiza se-CAAC.
Kubikwa ukuthi isitifiketi sokuhlolwa kohlobo sikhishwa yinhloko yesitifiketi sohlobo neqembu lokuhlola, elivumela abamele izivivinyo (kufaka phakathi abamele abaqokiwe) ukwenza ukuhlolwa ngaphambi kokuhlolwa kwendiza, ukuhlola indawo yokuhlola, ukuphatha ukuhlolwa kwendiza kuhlobo lwendiza nokuhlola konke okuhlobene imibhalo.
Kuyizixhumanisi ezibalulekile zezindiza ezentengiselwano ukuthola isitifiketi sokulungela ukuba semoyeni kanye nohlobo lokuhlolwa kwemvume yokwenza ukuhlolwa kwezindiza zezitifiketi ze-CAAC. Ngokwe- "Regulations on Certification of civil aviation products and parts" (umnyango CCAR 21), ngaphambi kokuhlolwa kokuhlolwa kwezindiza kwe-CAAC, umfakisicelo uzokhombisa i-CAAC ukuthi izindiza ziyahlangabezana nezidingo ezifanele zesakhiwo semithethonqubo yokulungela ukuba semoyeni, sekuphothule ukuhlolwa okuyisisekelo nokuhlolwa okuyisisekelo, wenze ukuhlolwa kwezindiza futhi wathumela imibiko.
Ngesikhathi sokuthuthukiswa kwephrojekthi yezindiza zabagibeli i-C919, inqubo yokuphepha inqubekela phambili yokuqala kanye nokuzinza yayihamba phambili. Njengamanje, zonke izindiza eziyisithupha zokuhlola zeC919 zifakwe emsebenzini wokuhlola izindiza. EYanliang waseShaanxi, uNanchang waseJiangxi, uDongying waseShandong, uXilinhot wase-Inner Mongolia, iTurpan waseXinjiang noDunhuang waseGansu. I-Flutter / aerodynamic servo elasticity, itafula, ukulinganiswa komoya, ukusebenza emazingeni okushisa aphezulu nomswakama, ukukhishwa kuketshezi lonke kwezindiza kwakuyizihloko eziyinhloko ngesikhathi sokuhlolwa kwendiza; kwenziwe uchungechunge lokuhlolwa komhlaba, ukuhlolwa kwendiza kwe-R & D nokuhlolwa kwendiza ukuhambisana, isiteshi samandla esiqinisekisiwe, uhlelo lokulawula izindiza, amagiya okufika wokubacindezela, ama-avionics nohlelo lukagesi; kuqede konke ukuhlolwa okumile kufaka phakathi i-2.5G limited load load static test, eyabeka isisekelo sokwenza isivivinyo sendiza yokuhlola.
Ngokuzayo, izindiza eziyisithupha ze-C919 ezingaphansi kokuhlolwa kwendiza zizoqhubeka zenze imisebenzi yokuhlola izindiza eqinile ngokuya ngohlelo, iqinisekise ngokucophelela ukuphepha nokwethembeka kwezindiza zeC919, ezizokwenza umsebenzi omuhle wokuqinisekiswa kwemithethonqubo yokulungela izindiza.
Izindaba zakamuva zikhombisa ukuthi ngo-2021, indiza enkulu yasekhaya yaseChina i-C919 izonikezwa usizo lwezindiza ngemuva kokuthola isitifiketi sokulungela ukuba semoyeni.
Uma kwenzeka ingozi ingekho, i-C919 yokuqala kufanele ihanjiswe eChina Eastern Airlines.
I-China Eastern Airlines, enendlunkulu eShanghai, ingumsebenzisi wokuqala we-C919 emhlabeni. Njengelungu le-CAAC "ithimba likazwelonke" kanye nebhizinisi eliphakathi nendawo lokundiza umphakathi edolobheni elifanayo ne-COMAC, umkhiqizi omkhulu wezindiza wasekhaya i-China Eastern Airlines ubelokhu esekela ukuthuthukiswa komkhakha wezindiza kazwelonke futhi wakuthatha njengomunye wemithwalo yemfanelo ebaluleke kakhulu, waba yikhasimende lokuqala we-C919 emhlabeni, ukuqeqesha nokunikeza abasebenzi bokuqala be-C919, nokuhamba nendiza yokuqala ye-C919. I-China Eastern ayikaze isuswe ekukhuleni kwezindiza zasekhaya zasekhaya.
Ngo-2010, iChina Eastern yasayina inhloso yokuthenga yezindiza ezingama-20 C919; ngoNovemba 1, 2016, iChina Eastern yasayina isivumelwano sohlaka lokusebenzisana ne-COMAC e-11th China International Aviation and Aerospace Expo, waba ngumsebenzisi wokuqala wendiza ye-C919 emhlabeni; ngo-Agasti 30, 2019, iChina Eastern isayine "isivumelwano sokuthengwa nokuthengwa kwezindiza se-ARJ21-700" ne-COMAC eBeijing.
Ngakho-ke, kungokwemvelo ukuthi iChina Eastern Airlines ithunyelwe i-C919 yokuqala, ngenkathi iChina Eastern Airlines ingavumela inkampani yayo engaphansi kwe-123 ukuthi isebenze.
Okwedlule: Njengokuhlanganiswa okukhethekile, imikhiqizo yezinyosi iba uhlobo olusha lwezinto zomphakathi eminyakeni yamuva
Okulandelayo: Inqubo yokushisela yensimbi yensimbi ehlanganisiwe